DEG DEG: Madaxweyne Farmaajo oo goordhow gaaray deegaanka Waaciye ee Gobolka Bari | Marqaan News Agency
DEG DEG: Madaxweyne Farmaajo oo goordhow gaaray deegaanka Waaciye ee Gobolka Bari
Published on January 11, 2018 by dahir · No Comments
Mudane Maxamed C/llaahi Farmaajo Madaxweynaha Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa saaka u safra magaalada Boosaaso ee xarunta Gobolak Bari,isagoo ka amba baxay magaalada Qardho o oay xalay ku hoyden.
Safarka madaxweynaha oo ah mid dhanka lugta ah waxaa ku weliya madaxweynaha Dowlad Goboleedka Puntland C/weli Maxamed Cali Gaas,wasiiro iyo xildhibaano ka kala tirsan golayaasha kala Duywan ee Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo maamulka Puntland.
Wuxuu goor dhow booqday madaxweynuhu deegaan lagu magacaabo Waaciye oo katirsan Gobolka Bari,halkaasi oo siweyn logu soo dhaweeyey.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalak Soomaaliya Mudane Maxamed C/llaahi Farmaajo iyo wafdigiisa ayaa la kulmay qeybaha kaladuwan ee bulshada iyo waxgaradka deegaankaasi,isago ouga mahadceliyay sida wanaasgan oo ay u soo dhaweeyeen.
Wuxuu madaxweynuhu dhageystay warbixin ku saabsan nolosha bulshada ku dhaqan deegaankaasi,inta uu safarkiisa dhanka dhulka ah uu ku jirana madaxweynuhu wuxuu la kulmayaa qeybaha bulshada ee kunool deegaanada ku yaala inta u dhexeysa magaalooyinka Qardho iyo Boosaaso.
Dhinaca kale Amaanka magaalada Boosaaso ayaa siweyn lo adkeeyey,iyadoo ay socdaan dhaq dhaqaaqyo iyo diyaar garow ballaaran oo ku aadan soo dhaweynta wafdiga madaxweynaha,waxaana qeybo kamid ah magaaladaasi lagu dhejiyay boorar ay ku xardhan yihiin sawirka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya.